Guurka oo la ogaaday in uu Lafaha Raga dhiso kana badbaadiyo cuduro badan oo Halis ah « AYAAMO TV
Guurka oo la ogaaday in uu Lafaha Raga dhiso kana badbaadiyo cuduro badan oo Halis ah
930 Views Date January 31st, 2014 time 9:53 pm
Waa markii ugu horraysay ee t aariikhda la ogaado in guurka iyo tayadiisu ay xidhiidh la leeyihiin lafaha qofka sida uu sheegay Dr. Carloyn Crandall oo ah khabiir caafimaadka ka dhiga Jaamacadda UCLA ee Maraykanka
Cilmi-baadhis ay sameeyeen khubaro Maraykan ah, ayaa shaacisay soo dhigtay in guurku ragga ka badbaadiyo cudurrada wadne-xannuunka iyo kansarka, isla markaana uu lafahooda ka dhigo qaar xooggan markuu ninku ku guursado isagoo 25 jir ka weyn.
Cilmi-badhayaashan waxay ogaadeen in ninka guurka fiican guursada amma xaaskiisu u fiican tahay uu jidh ahaan dhismo, marka loo eego ragga xaasaskooda inta badan ay kala tagaan amma aan guursan ba.
Khubaradan waxay shardi ka dhigeen da’da uu ninku ku guursanayaa ka weynnaato 25 jir, halka ay tilmaameen ninka da’daa ka hooseeya in lafaha jidhkiisu diciifaan hadduu yaraan ku guursado.
Daraasaddan oo lagu daabacay wargeyska la yidhaa Osteoporosis International, waxba
kama ay sheegin sida haweenku ku noqdaan guurka, balse waxay ku saabsanayd xidhiidhka guurka wanaagsan ee ragga iyo caafimaadkooda ka dhexeeya, waxayna sheegeen in haweenayda guursata say inta badan caawiya ay noqoto mid jidh ahaan xooggan oo caafimaad qabta.
“Guurka horraanta lagu guursadaa waxay ragga ka dhigtaa mid dhib la kulma oo inta badan isku buuq badan,” ayuu yidhi Dr. Arun Karlamangla oo wax ka qoray cilmi-baadhistan.
Waa markii ugu horraysay ee t aariikhda la ogaado in guurka iyo tayadiisu ay xidhiidh la leeyihiin lafaha qofka sida uu sheegay Dr. Carloyn Crandall oo ah khabiir caafimaadka ka dhiga Jaamacadda UCLA ee Maraykanka, “Caafimaadka wanaagsan kuma xidhna oo kaliya qofka oo caafimaad fiicnaada oo cunto fiican qaata, balse waxa saameeya oo kale guurka oo kuu fiicnaada,” ayuu yidhi Dr. Carloyn.
Cilmi-badhayaasha oo isticmaalay macluumaad ay ka heleen da’ihii dhexe ee dalka Maraykanka daraasado la sameeyey, taasoo ay ku eegeen dad da’doodu u dhexayso 25 ilaa 75 jir, waxaanay waqtiga macluumaadkan la ururiyey ahayd intii u dhexaysay 1995 ilaa 1996, iyadoo ka qaybgalayaasha dib waraysi loola yeeshay 2004 ilaa 2005, waxana baadhitaan lagu sameeyey awoodda lafahooda, waxana la ogaaday in ragga guurka fiican helaa ay laf ahaan aad u dhismeen.